चीनसंगको तनावले भारत र ताइवानलाई नजिक धकेल्छ - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय चीनसंगको तनावले भारत र ताइवानलाई नजिक धकेल्छ
चीनसंगको तनावले भारत र ताइवानलाई नजिक धकेल्छ
काठमाडौं । बढ्दो बेइजिङ विरोधी भावनाको बीचमा भारतले ताइवानको पक्षमा जनमत एकदमै परिवर्तन भएको देखिरहेको छ। तर के नयाँ दिल्लीले ताइपेसँगको बलियो सम्बन्धका लागि आफ्नो एसियाली प्रतिद्वन्द्वीको क्रोधलाई जोखिममा पार्न सक्छ?
जब नयाँ दिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासले यस महिनाको सुरुमा भारतमा पत्रकारहरूलाई एक सल्लाहकार पठायो, यसले यति शानदार रूपमा ब्याकफायर गर्ने कदमको अनुमान गर्न सक्दैन। एक घटना जुन अन्यथा धेरै न्यूजरूमहरू द्वारा कम रिपोर्ट गरिएको थियो, र आम जनताले ठूलो मात्रामा बेवास्ता गर्यो, प्रमुख समाचार आउटलेटहरूमा हेडलाइन बन्यो र सोशल मिडियामा शीर्ष प्रवृत्ति बन्यो।
यो सबै चिनियाँ दूतावासले भारतमा पत्रकारहरूलाई ताइवान राष्ट्रिय दिवसको रिपोर्टिङ गर्दा “एक चीन नीति” को उल्लङ्घन नगर्न आग्रह गर्दै एक नोट जारी गरेपछि सुरु भयो।
भारतीय प्रेसलाई “निर्देशनहरू” ले पत्रकारहरू र सोशल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू बीच आक्रोश फैलायो। भोलिपल्ट, भारतको विदेश मन्त्रालयले भन्यो कि भारतसँग “स्वतन्त्र मिडिया छ जसले मुद्दाहरूमा उनीहरूले उपयुक्त देखे अनुसार रिपोर्ट गर्दछ।”
ताइवानका विदेशमन्त्री जोसेफ वुले पनि चीनको भनाइप्रति अकूटनीतिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अक्टोबर 10 मा मनाइने ताइवान राष्ट्रिय दिवसमा, हजारौं भारतीय प्रयोगकर्ताहरूले ताइवानका जनताका लागि शुभकामना पोस्ट गरे।
तीमध्ये भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राजनीतिज्ञ पनि थिए। पार्टीको दिल्ली इकाईका प्रवक्ता ताजिन्द्र सिंह बग्गाले एक कदम अगाडि बढेर चिनियाँ दूतावास बाहिर पोस्टर टाँगे: ताइवान, राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना।
अन्य राष्ट्रहरू जस्तै भारतको ताइवानसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छैन। तर सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि दुई पक्षले अनौपचारिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि दुई एसियाली प्रजातन्त्रबीचको सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ।
बेइजिङका कारण भारत र ताइवानबीचको सम्बन्ध जति अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यसरी अघि बढ्न नसकेको क्रस स्ट्रेट सम्बन्धका विज्ञ नम्रता हसिजाको विश्वास छ ।
“सन् १९९५ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीवी नरसिम्हा रावले ताइवानसँगको हाम्रो सम्बन्धले मुख्य भूमि चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कहिल्यै असर नपर्ने बताएका थिए,” नयाँ दिल्लीस्थित सेन्टर फर चाइना एनालिसिस एण्ड स्ट्राटेजीका रिसर्च फेलो हसिजाले भने। शुरुवातमा, भारत-ताइवान सम्बन्धमा चीनको छाया ठूलो छ,” उनले भनिन्।
ताइपेईका विज्ञहरू पनि सहमत छन् कि चीनले दुई लोकतन्त्रबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा ठूलो भूमिका खेल्छ।
“जबसम्म भारतले बेइजिङको दबाबको सामना गर्दैन र ताइवानसँगको आफ्नो बाह्य सम्बन्धमा चिनियाँ चासोलाई बेवास्ता गर्दैन, तबसम्म द्विपक्षीय सम्बन्ध सुचारु हुन सक्दैन,” ताइपेईको नेशनल चेङ्ची विश्वविद्यालयको ताइवान सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडीजका निर्देशक प्रोफेसर फु-कुओ लिउले भने। ।
सन्तुलन कायम गर्दै
धेरै भारतीय टिप्पणीकारहरूले तर्क गरेका छन् कि नयाँ दिल्ली “बेइजिङको लागि अत्यधिक सम्मानजनक” हुनु हुँदैन वा चिनियाँ आपत्तिहरूमा ध्यान दिनु हुँदैन।
तर हासिजा, भारत र ताइवानबीच घनिष्ठ सम्बन्धको प्रबल वकिल भए पनि, ताइवानलाई एक देशको रूपमा मान्यता दिनु यथार्थपरक सम्भावना नभएको स्वीकार्छिन्।
न त भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकाको जस्तै ताइवानसँग संलग्न हुन सक्छ; गहिरो राजनीतिक र सैन्य सम्बन्ध कायम राख्दै औपचारिक रूपमा एक चीन नीतिलाई मान्यता दिँदै।
“पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाले भारतको लागि काम गर्दैन, तर दुईबीच रणनीतिक साझेदारी सम्भव छ,” हसिजाले भने।
“भारतले बिस्तारै बलियो साझेदारी निर्माण गर्नुपर्नेछ। भारत आर्थिक वा सैन्य रूपमा अमेरिकाको जस्तो स्थितिमा छैन,” उनले भनिन्। “साथै, चीन भारतको निकट छिमेकी हो,” उनले चर्को विवादित सीमामा सम्भावित नतिजालाई उल्लेख गर्दै थपिन्।
‘एक्ट ईस्ट’ले ‘न्यू साउथबाउन्ड’ भेट्छ
विगत दशकमा, दुई देशको विदेश नीति दृष्टिकोणमा अभिसरणको सम्भावित बिन्दु देखा पर्‍यो: भारतको “एक्ट ईस्ट नीति”, जसले इन्डो-प्यासिफिक देशहरूसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन खोज्छ, र ताइवानको “नयाँ साउथबाउन्ड नीति,” दूध छुटाउने प्रयास। चिनियाँ बजार बन्द।
तर लुईका अनुसार यी दुई नीतिगत पहलहरू अहिलेसम्म दुई पक्षले संयुक्त रूपमा पछ्याउन सकेका छैनन् र यसैले सहयोग बढाउन असफल भएको छ।
“तिनीहरूलाई सँगै अन्वेषण र संयुक्त रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ ताकि साझा लक्ष्यहरू देखा पर्न सकून्,” उनले भने।
नयाँ दिल्ली, तथापि, ताइपेई संग शैक्षिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध बाहिर जान सतर्क छ। भारत र ताइवानले 2018 मा द्विपक्षीय लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, र भर्खरै त्यहाँ मिडिया रिपोर्टहरू थिए कि दुबै पक्षले बेइजिङबाट हप्काउँदै, व्यापार सम्झौतामा वार्ता अगाडि बढ्ने विचार गरिरहेका थिए।
बेइजिङले नयाँ दिल्ली र ताइपेई बीचको कुनै पनि आधिकारिक आदान-प्रदानको “घोर विरोध” गर्नेछ भनी जोड दिँदै चीनले यस हप्ता भारतलाई ताइवानसँगको सम्बन्धलाई “विवेकी र उचित रूपमा” हेर्न आग्रह गरेको छ।
ताइवानतर्फ कुनै पनि भारतीय प्रगति बेइजिङबाट तुरुन्तै तीखो प्रतिक्रियाको सामना गर्दछ।
यस वर्षको सुरुमा, भारतको सत्तारूढ दलका दुई सांसदहरूले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ्ग-वेनको सपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिएपछि चीनले नयाँ दिल्लीमा डिमार्च जारी गर्‍यो।
मेमा आयोजित कार्यक्रममा, सांसदहरूले राष्ट्रपतिलाई दोस्रो कार्यकाल जितेकोमा बधाई दिए र एक चीन नीतिमा भारतको पालनाको विरोधमा टापुलाई “लोकतान्त्रिक देश” भनेर उल्लेख गरे।
ताइवान समर्थक वा चीन विरोधी?
यस गर्मीमा चीनसँगको सीमामा झडपहुँदा कम्तीमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएपछि बेइजिङ विरोधी भावना भारतीय जनतामा उब्जिएको छ ।
यसले हङकङ र ताइवानमा स्वतन्त्रता समर्थक आन्दोलनहरूप्रति ऐक्यबद्धताको भावना पनि बढाएको छ।
फलस्वरूप, यस वर्षको 109 औं ताइवान राष्ट्रिय दिवसमा भारतमा अभूतपूर्व स्तरको समर्थन देखियो।
लगभग एक दशकदेखि यस क्षेत्रलाई ट्र्याक गरिरहेकी हसिजाले भनिन्, “ताइवानको राष्ट्रिय दिवसको यस्तो व्यापक उत्सव मैले भारतीयहरूमाझ कहिल्यै देखेको छैन।” “भारतका मानिसहरू पनि अहिले ताइवानप्रति बढी सचेत छन् र यसलाई छुट्टै देशको रूपमा हेर्छन्।”
भारतबाट आएको समर्थन र नयाँ सामाजिक सञ्जाल अनुयायीहरूको लहरले राष्ट्रपति साईलाई “भारतका प्रिय साथीहरू” लाई धन्यवाद मात्र नभई दक्षिण एसियाली राष्ट्रको उनको 2012 यात्राको फोटोहरू पनि साझा गर्न प्रेरित गर्यो।
“हामीले भारतीय मित्रहरूबाट देखेको बलियो समर्थनको लागि आभारी छौं,” ताइवानको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कोलास योटाकाले भने।
“ताइवान र भारतीय जनताले विगतमा धेरै अन्तरक्रिया गर्नुपर्थ्यो,” कोलास योटाकाले भने। “मलाई विश्वास छ कि हामीसँग यो साझेदारीलाई सुदृढ र सुदृढ गर्ने थप अवसरहरू हुनेछन्,” उनले भनिन्।
तर ताइवानको समर्थनमा भर्खरैको वृद्धि चीनप्रति बढ्दो वैमनस्यले रेखांकित गरेको छ। यो ताइपेईका पर्यवेक्षकहरूमा हराएको छैन।
“ताइवानमा एक सामान्य भावना छ कि प्रत्येक भारत-चीन सीमा द्वन्द्व पछि, ताइवानप्रति भारतीय दृष्टिकोण न्यानो हुँदै जान्छ,” फु-कुओ लिउले भने। “ताइवानले भारतबाट सहयोगको लागि वास्तविक इच्छाको अपेक्षा गर्नेछ, किनकि यस्तो सम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्नेछ।”
सीमा झडप पछि, केही टिप्पणीकारहरूले भारतले आफ्नो एसियाली प्रतिद्वन्द्वी विरुद्ध ताइवानलाई फाइदाको रूपमा प्रयोग गरेको मुद्दा बनाएका छन्।
नम्रता हसिजा यस्तो रणनीति उल्टो फलदायी हुने विश्वास गर्छिन्। “चीनसँग तनाव बढ्दै गएकोले भारतले ताइवानलाई खेल्ने कार्डको रूपमा सोच्नु हुँदैन,” उनले भनिन्।
“जबकि चीन एक कारक बन्न जारी रहनेछ, भारतीय जनताको साथमा पनि, भारत र ताइवानले सुस्त तर स्थिर प्रगति गरिरहनु पर्छ,” हसिजाले भने। “यो समय हो कि भारतले ताइवानलाई चिनियाँ प्रिज्मबाट हेर्न छोड्यो।”
Previous articleचिनियाँ व्यावसायिक अन्तरिक्ष प्रक्षेपण योजनाहरू बारम्बार असफल भइरहेको खुलासा !
Next articleचीनलेद्वारा नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी ।।